China Motion Sensor 40 50W 60 Watt Module Integrated Solar Lamp Led Street Light na-emepụta na ndị na-ebubata ya | Kasem
Sensọ Motion 40 50W 60 Watt Module Inductive Integrated Solar Lamp Led Street Light
Okpomọkụ agba (CCT): 2700-6500K
Nrụpụta ọkụ oriọna (lm/w): 120
Index Rendering agba (Ra): 80
Voltaji ntinye (V): AC85-305V
Oriọna na-egbuke egbuke Flux (lm): 2400-3000
Okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃): -25-65
Asambodo: ce, EMC, ETL, LVD, RoHS
Akwụkwọ ikike (Afọ): afọ 3
Nọmba nlereanya: KAIG-01
Igwe nkuku (°): 70*140°
Ụdị ihe: N'èzí ìhè anyanwụ
Ihe eji eme ụlọ: Aluminom na-eme ihe nkedo
Oge ọrụ: ihe karịrị ụbọchị atọ
Njirimara: Nchapụta dị elu
Igwe ọkụ anyanwụ: Monocrystalline Silicon
Ụdị batrị: batrị ígwè lithium
Oge nchaji anyanwụ: 7Hrs
Onye njikwa: MPPT/PWM
Na-egbuke egbuke ma dị ogologo:N'okpuru chaja zuru oke, ọkụ anyanwụ a nwere ike inye ogologo oge ọrụ ihe dị ka awa 20-25 na ọnọdụ na-egbuke egbuke, nwere ike 5-9 abalị na-aga n'ihu na-enwu ọkụ na ọnọdụ adịghị mma. Ìhè anyanwụ nke okporo ámá nke nwere 196pcs dị elu LED beads, ruo 30000 Lumen, iko reflector na 3.2V/12.6V 42,000mAh batrị.
Sensọ Motion PIR & Photocell Sensọ:Ìhè okporo ụzọ n'èzí mgbede ruo chi ọbụbọ gbanyere n'abalị, gbanyụọ n'isi ụtụtụ wee malite chaja. Mgbe achọpụtara mmegharị ọ bụla (dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ na-abịa, ụgbọ ala na-abịa, ụda dị iche iche, wdg) ọ na-enwu enwu, ọ na-alaghachi azụ na ọnọdụ nhụsianya ọzọ ma ọ bụrụ na ọ pụọ na mpaghara ahụ achọpụtara.
Ọ dị mfe ịwụnye ikuku ikuku:Enwere ike ịkwanye ihe mgbochi ide mmiri na-enye ọkụ na mgbidi ma ọ bụ ogwe osisi. Atụ aro dayameta okporo osisi bụ 2.36 ruo 3.94 inch, ugwu elu bụ 8m (26.2ft), ebe ìhè bụ 2263sq.ft. Ekwesịrị ịgbanwuo ihe ngbanwe tupu ịgbanye na chajị. Ngwa eji eme ihe bụ hex wrench (anaghị etinye ya). Ọ dị arọ 38 pound.
Na-adịgide adịgide & Ihe mgbochi mmiri:LED okporo ụzọ ekwesịghị ịkwụ ụgwọ ọkụ eletrik. azụmahịa nnukwu ogwe anyanwụ nwere ike ịcha ngwa ngwa. Oghere jụrụ oyi nke ọtụtụ ahịrị, mmetụta dị mma dị mma, shei aluminom iji gbochie nchara. IP65 enweghị mmiri, enwere ike itinye ya ma hapụ ya n'èzí n'ọnọdụ ihu igwe ọ bụla n'afọ niile
Amụma akwụkwọ ikike afọ 3:Akwụkwọ ikike ngwaahịa afọ 3, ọrụ n'efu na nkwado teknụzụ sitere n'aka onye na-ere ahịa, enweghị nchekasị na ihe karịrị awa 50,000 ogologo ndụ ogologo ọkụ anyanwụ. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla bilitere.
ihe nkọwa Nkọwa ogologo ndụ
Igwe ọkụ anyanwụ 18.5% arụmọrụ; Poly crystalline silicon; Ịrụ ọrụ dị elu; Na-agbakwunye etiti aluminom, iko ọkụ. 30 W ~ 310 W 20 ~ 25 afọ
Batrị eghe Ụdị akara, Gelled; okirikiri miri emi, mmezi Free. 24 ah ~ 250 ah 5-8 afọ
Onye njikwa anyanwụ nwere ọgụgụ isi Igwe ọkụ na-akpaghị aka na njikwa oge; nchebe nfefe/nhapu; Nchedo njikọ azụ; gbanwee gaa na akpaaka na nkwụsị ọkụ ihe mmetụta mgbe awa 11-12 gachara. 10/15/20Ah 5-8 afọ
Isi iyi ọkụ LED 120 ogo n'akuku; Ike dị elu, nchapụta dị elu. 10W ~ 300W 5-8 afọ
Ụlọ oriọna Aluminom na-anwụ anwụ, IP65; Nfesa dị elu & iko nwere ọkụ njupụta. 80-120 cm > afọ 30
Osisi Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ galvanized; Na ogwe aka, bracket, flange, fittings, cable, etc; Ihe mkpuchi plastik, ihe akaebe nchara; ifufe na-eguzogide: ≥150KM / H. 3 m ~ 15 m > afọ 30
1. N'elu usoro nhazi oge na-arụ ọrụ: 11-12 awa kwa abalị, batrị ike na-aga n'ihu 2-3 ụbọchị ndabere. Nhazi ahụ dabere na ngụkọ sayensị na ahụmịhe ọrụ injinia.
2. Osisi galvanized kwadoro bụ ihe nlereanya bara uru nke anyị kwadoro. Enwere ike ịhazi ya site na iji ụkpụrụ ndị ọzọ dịka onye ahịa chọrọ.
3. A na-akwado akụkụ niile nke CE, yana ọkwa dị elu na-ezute ụkpụrụ Europe.
4. Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa nkọwa zuru ezu nke akụkụ ọ bụla nke usoro ahụ.
Ike 10uw 150w 20 ow 250w
Ike Panel PV 6V3u 6V50w 6V6u 6V7u
Nha panel 792*272 1070*272 1242*272 1428*272
ngwa ngwa 3.2V/25AH 3.2V/40AH 3.2V/50AH 3.2V/60AH
Isi Iyi Ìhè 5050 5050 5050 5050
LEDQTY 100 pcs 150 pcs 200 pcs 250 pcs
ma ọ bụ okpomọkụ 6000-7000K 6000-7000K 6000-7000K 6000-7000K
Ụbọchị mmiri ozuzo 3-5 ụbọchị 3-5 ụbọchị 3-5 ụbọchị 3-5 ụbọchị
oge ịkwụ ụgwọ 5-8h site na Sun 5-8h site na Sun 5-8h site na Sun 5-8h site na Sun
Oge ọkụ 10-12h 10-12h 10-12h 10-12h
usoro nchịkwa Njikwa Rada+ Njikwa ọkụ
Mpaghara na-egbuke egbuke 120 120 120 150
Ogo ahụ 800*426*43 1078*426*43 1250*426*43 1430*426*43
Akwụkwọ ikike Afọ 3 Afọ 3 Afọ 3 Afọ 3
Flux na-egbuke egbuke 100-110 lw 100-110 lw 100-110Imw 100-110 lw
Isi Iyi Ìhè Bridgelux Bridgelux Bridgelux Bridgelux
1. Maka oge mbụ iji, biko kwụọ ngwaahịa ahụ n'okpuru anyanwụ ruo ọtụtụ awa tupu ịrụ ọrụ.
2. Ọrụ ịchaji nke oghere anyanwụ na-adabere na oge ọkụ na ọnọdụ ihu igwe. Ka ìhè anyanwụ na-esiwanye ike ma na-adị ogologo karị, ka obere oge chaja na-ewe. N'ụbọchị igwe ojii ma ọ bụ mmiri ozuzo, arụmọrụ batrị ga-ebelata, nke na-ebute oge ọkụ dị mkpụmkpụ.
3. A ga-ekpuchi oghere anyanwụ na ájá n'ihi ogologo oge eji eme ihe n'èzí. Ka ị nweta arụmọrụ nchaji ka mma, biko hichaa ya mgbe ọ dị mkpa.
Ọkụ na-ekpo ọkụ n'okporo ụzọ anwụ ruo Dawn Solar Mode na-arụ ọrụ
Gbanwuo akpaaka na mgbede, gbanyụọ chi ọbụbọ. Mgbe achọpụtara mmegharị ahụ, ọ na-egbuke egbuke; Ọ bụrụ na mmegharị ahụ na-apụ, ọ ga-alaghachi na ọnọdụ ọchịchịrị ọzọ. Iji chekwaa ọkụ eletrik, na mgbede, na-agụta site na mmalite ọkụ.
-1-4H: ọnọdụ ngagharị 100% nchapụta, ọnọdụ gbara ọchịchịrị 20% nchapụta;
-5-8H: ọnọdụ ngagharị 70% nchapụta, ọnọdụ gbara ọchịchịrị 20% nchapụta;
-9-12H: ọnọdụ ngagharị 60% nchapụta, ọnọdụ gbara ọchịchịrị 20% nchapụta;
- Gbanyụọ na akpaghị aka mgbe awa iri na abụọ gachara.
Ncheta pụrụ iche: N'oge oyi, anyanwụ adịghị ike, na-akpata obere oge ọkụ, nke bụ ihe nkịtị, Ọ bụrụ na ikpe ahụ emee, biko jiri ya mgbe ịchaji zuru ezu.
Chọpụta ọdịiche dị n'etiti On na gbanyụọ
Biko gosi na mgba ọkụ emeghere tupu echichi na chajị.
Nnukwu mbara igwe
Monocrystalline anyanwụ fotovoltaic panels mgbanwe mgbanwe ọnụego dị elu nke ukwuu na nchaji ọsọ na-adị ngwa ngwa.
Batrị ike buru ibu
12.6 / 42AH nnukwu ikike batrị lithium, ogologo ndụ ojiji bụ afọ 5-8.
Dakọtara nke ọkụ ọkụ ọdịnala 250W.
250PCS otu kristal 3030 patch, mgbawa nchekwa oghere anya mpụga, ultra-light
Nchaji akpaaka n'ụbọchị
Oge: ： 5-8 Awa (site na anyanwụ)
Ọkụ akpaaka n'ọchịchịrị
Akụcha ọkụ zuru oke maka awa 10-12
Ihe mgbochi mmiri IP65 na-eme ka ọ nwee ike iguzogide ọnọdụ dị iche iche n'èzí na ọnọdụ ihu igwe
• 1x ọkụ ọkụ okporo ụzọ anwụ
• 10 x kposara
• 3 x akpa
• 1 x Frame nkwado
• 1 x Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ
1. Biko gụọ ntuziaka ahụ nke ọma tupu echichi.
2. Biko gbanye mgba ọkụ tupu echichi ma ọ bụ chaja. N'ọchịchịrị, mgbe agbanwuru mgba ọkụ, ọ ga-enwu mgbe 10 sekọnd gasịrị.
3. Biko họrọ ọnọdụ na-enweghị ebe nchekwa maka anwụ zuru oke na ikpughe zuru oke.
4. A naghị etinye ngwá ọrụ ntinye na ogwe osisi.
Nke gara aga: Igwe ọkụ na-ere anwụ n'okporo ámá oriọna sola ọkụ
Osote: Ichekwa ike n'èzí IP65 ìhè anyanwụ n'okporo ámá na-eduzi ọkụ okporo ụzọ 200W400w ọkụ n'okporo ámá
anyanwụ n'èzí ubi ìhè ụzọ stake iko ...
NEW Ultra slim Aluminom n'èzí iju mmiri ọkụ ...
Mgbidi mgbidi dị n'èzí 12W LED Modern Wall Sconce L...
Ogige ọkụ IP65 LED 80w ogige ọkụ ọkụ ...